Norway: Dowlada oo ogolaatay inay qoxooti kasoo qaadato Giriiga. - NorSom News
Kalfadhi ay maanta yeesheen baarlamaanka Norway, ayay xisbiyada bahwadaagta ku ah xukuumada kataliso Norway ee Høyre, Krf iyo Venstre isku raaceen inay Norway ka qeybqaadato dib u dajinta loo sameynayo qaar kamid ah qoxootiga ku go´doonsan xerada Moria ee dalka Giriiga. Halkan ka akhri
Wasiiradda cadaalada Norway, Monica Mæland oo saxaafada la hadashay ayaa sheegtay in wali aan go´aan laga gaarin tirada qoxootiga ay Norway soo qaadaneyso, balse hada la isku raacay in guud ahaan Norway ay qeyb ka noqoto dib u dajinta ay wadamada EU-du u sameynayaan qaar kamid ah qoxootiga kunool xerada Moria ee dalka Giriifa.
Norway ayaa ku adkeysaneyso inay soo qaadaneyso qoxooti, hadii ay arintaas sameynayaan ugu yaraan 8 ilaa 10 wadan oo kale oo Yurub ah. Waxeyna wasiiradda cadaaladu sheegtay inay Norway soo qaadan doonto dadka ay u badantahay inay magangalyo ka helaan Norway, gaar ahaan caruurta iyo qoysaska.
Xigasho/kilde: Regjeringspartiene enige om Moria-løsning
Previous articleNorway: Magaalo codsatay in si gaar ah looga daayo karantiilka booqashada SWEDEN.
Next articleBoolis wareystay 15-jir dilay wiil soomaali ah oo maxkamad la saarayo.